Baiboly pejy 704 - Ny Baiboly
Voalohany < 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Joda toko 1 (tohiny)
25dia ho an'Andriamanitra tokana Mpamonjy antsika, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, ny voninahitra sy ny fiamboniana, ary ny hery sy ny fanjakana, hatrizay hatrizay, sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Amena.
17Vao nahita azy aho, dia nitsingidina teo an-tongony toy ny maty; fa nanendry ahy tamin'ny tànany havanana izy, ka nanao hoe: Aza matahotra; izaho no Voalohany sy Farany ary Velona; 18efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny afobe. 19Koa soraty ny zavatra efa ahitanao, sy izay ankehitriny, ary izay mbola ho avy koa any aoriana; 20izao no hevitry ny kintana fito hitanao teo an-tànako an-kavanana, sy ny fanaovan-jiro volamena fito: ny kintana fito moa dia ny anjelin'ny Eglizy fito; ary ny fanaovan-jiro fito kosa dia ny Eglizy fito.
Fanambaràna toko 2
Ny teny ho an'ny Eglizy fito - Ho an'ny Eglizy any Efezy - Ho an'ny Eglizy any Smirna - Ho an'ny Eglizy any Pergama - Ho an'ny Eglizy any Tiatira.
1Manorata ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Efezy: Izao no lazain'ilay mitana ny kintana fito eo an-tànany an-kavanana, sy mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito:
2Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny fandeferanao, mbamin'ny tsy fahazakanao ny ratsy fanahy; fantatro fa nozahanao toetra ireo manao azy ho apostoly nefa tsy izy, ka hitanao fa mpandainga ireny; 3ary manana fandeferana hianao, ka niaritra noho ny anarako, ary tsy ketraka. 4Saingy izao no aniniako anao: nihemotra tamin'ny fitiavana voalohany hianao. 5Koa tsarovinao izay nihemoranao, dia mibebaha, ka miverena amin'ny asanao voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao aho, ka hanesotra ny fanaovan-jironao amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka hianao. 6Misy anananao sitraka ihany anefa, dia izao: mankahala ny asan'ny Nikolaïta izay halako koa hianao.
7Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy: Izay mandresy, havelako hihinanany ny hazon ny fiainana izay ao amin'ny paradizin'Andriamanitra.
8Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Smirna: Izao no lazain'ilay Voalohany sy Farany, izay efa maty ka velona indray:
9Fantatro ny fahoriana amam-pahantranao, nefa manan-karena hianao; ary fantatro ny fitenenan-dratsin'ireo manao azy ho Jody, nefa tsy izy, fa sinagogan'i Satana. 10Aza matahotra na inona na inona amin'izay efa hiaretanao. Indro, efa handatsaka ny sasany aminareo an-tranomaizina ny demony, mba hovoazaha toetra hianareo, sy hiari-pahoriana hafoloana. Mahareta ambara-pahafaty, dia homeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana.
11Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy: Izay mandresy dia tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa.
12Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Pergama: Izao no lazain'ilay manana ny sabatra marani-dany roa:
13Fantatro ny itoeranao, dia eo amin'ny misy ny seza fiandrianan'i Satana; nefa mitana mafy ny anarako hianao, ka tsy nandà ny finoana ahy na dia tamin'ny andron'i Antipasy martiriko aza, izay lehilahy mahatoky ahy sy novonoina teo aminareo, dia teo amin'izay onenan'i Satana. 14Manan-teny kely aminao anefa aho, fa ao aminao dia misy mitana ny fampianaran'i Balaama, izay nanome fo an'i Balàka hanisy fanafintohinana eo anoloan'ny zanak'Israely, mba hitarika azy hihinan-kena naterina tamin'ny sampy sy hijangajangana. 15Toy izany koa, ao aminao dia misy olona manaraka fampianarana manahaka ny an'ny Nikolaïta. 16Koa mibebaha, fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana aho, ka hamely an'ireo amin'ny sabatry ny vavako.
17Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy. Izay mandresy dia homeko màna miafina, sady homeko vato fotsy misy anaram-baovao voasoratra tsy misy mahalala afa-tsy izay mandray azy ihany.
18Manorata koa ho an'ny anjelin'ny Eglizin'i Tiatira: Izao no lazain'ny Zanak'Andriamanitra, izay toy ny lelafo ny masony, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano:
19Fantatro avokoa ny asanao, ny finoanao, ny fitiavanao, ny fiantranao, ny fandeferanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. 20Manan-teny kely aminao anefa aho, satria i Jezabela ilay vehivavy manao azy ho mpaminany, avelanao hampianatra sy hanangoly ny mpanompoko hijangajanga sy hihinan-kena natolotra tamin'ny sampy. 21Efa nomeko andro hibebahana izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangany. 22Ka indro hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary hozoim-pahoriana lehibe izay mijangajanga aminy, raha tsy mibebaka amin'ny asa nampianarin-dravehivavy azy. 23Hasiako amin'ny fahafatesana ny zanany, dia ho fantatry ny Eglizy rehetra fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary homeko araka ny asanareo avy hianareo rehetra. 24Ary indreo hianareo mpino sisa any Tiatira, izay tsy manana izany fampianarana izany, sy izay rehetra tsy nahalala ireny antsoin'ny sasany hoe sain-dalin'i Satana ireny, dia izao kosa no lazaiko aminareo: Tsy hovesarako entana hafa hianareo, 25fa tano mafy aloha izay anananareo, mandra-pihaviko.
26Ary izay handresy ka haharitra amin'ny asako hatramin'ny farany, dia homeko fahefana amin'ny firenena; 27hifehy azy amin'ny tehim-by izy, ary hanorotoro azy, toy ny vilany tany, 28araka izay efa noraisiko tamin'ny Raiko, ary homeko azy ny kintana fitarika andro. 29Izay manan-tsofina aoka hihaino ny lazain'ny Fanahy amin'ny Eglizy.
Pejy: Voalohany < 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3300 seconds